Huawei Mate 30 sy Mate 30 Pro: Famaritana, vidiny ary fandefasana | Androidsis
Huawei loAs nohamafisin'i Huawei ny tenany tamin'ity volana ity, Ny Huawei Mate 30 sy Mate 30 Pro dia natolotra efa amin'ny fomba ofisialy. Ny orinasa dia nanao hetsika tao an-tanànan'i Munich izay nametrahany antsika ny laharana farany ambony. Nandritra ireo herinandro maro dia maro ny tsaho momba ity faritra vaovao ity, saingy farany afaka namantatra izay rehetra momba azy izahay.
Nisy karazana fanehoan-kevitra isan-karazany momba an'io elanelan'ny Huawei Mate 30 io, toy ilay tsy ampiasain'ny fampiharana Google. Nangina ny orinasa nandritra izay volana maro izay ary androany dia ilaozan'izy ireo amina toerana ambony izahay nantsoina mba hahomby eo amin'ny tsena. Famaritana tsara, izay miavaka indray ny sary, ankoatry ny heriny lehibe.
Araka ny efa noresahin'izy ireo tato anatin'ny herinandro, ireo telefaona roa ireo mitazona endrika mitovy amin'ny tamin'ny taon-dasa. Raha ny maodely ara-dalàna dia misy toerana kely miendrika rano mitete iray, malina kokoa ary mitana toerana kely kokoa. Raha ny maodely Pro dia mitazona marika malaza sy tononina, na dia manify kokoa noho ny teo aloha aza izany.
3 Herinaratra madio sy fanatsarana sary
4 Miaraka amin'ny Android Open Source ary tsy misy Google Apps
5 Vidiny sy fandefasana
Voalohany indrindra Miresaka momba ny telefaona manome ny anarany amin'ity faritra ity izahay. Toy ny mahazatra amin'ity sehatra ity, ny Huawei Mate 30 no tsotra indrindra amin'ireo telefaona roa ireo, na dia tsy goavana aza ny fahasamihafana misy eo amin'ny telefaona roa. Ampy hahitan'izy ireo fa ny maodely Pro dia mamela zavatra hafa amin'ity tranga ity. Saingy mahita avo lenta isika, izay manana ny zava-drehetra handresena ireo mpampiasa. Ireto avy ireo antsipirihany feno:
Operating System Loharano misokatra Android miaraka amin'ny EMUI 10 sy Huawei Mobile Services
efijery 6.62 mirefy habe oled
Fakan-tsary aoriana 40 MP SuperSense + 16 MP zoro ultra 8 telefaonina XNUMX MP
Fitaovana hafa Fampahalalana momba ny dian-tanan-tànana / fankatoavana ny tarehy NFC / 3D /
bateria 4.200 mAh miaraka amin'ny famandrihana haingana ny 40W sy ny famandrihana tsy misy tariby 27W
Faharoa hitantsika ny telefaona mahery vaika indrindra amin'ity marika vaovao farany ambony an'ny marika sinoa ity. Ny Huawei Mate 30 Pro dia manana ny zava-drehetra mba ho iray amin'ireo maodely be mpividy indrindra amin'ity sehatry ny tsena ity amin'ny volana ho avy. Izy io dia aseho amin'ny alàlan'ny telefaona matanjaka, miaraka amin'ny toetra teknika tsara, miaraka amin'ny fiheverana manokana ny sary amin'ity tranga ity. Ny avo lenta rehetra izay afaka manome ady be eny an-tsena. Ireto avy ireo antsipirihany feno:
Araka ny hitanao dia aseho ho maodely avo lenta amin'ny feno indrindra amin'ny lafiny rehetra izy io. Tena mahay mandanjalanja amin'ny lafiny rehetra dia afaka manamafy izany isika izy no sainam-pirenena vaovao marika Sina mandritra ny volana vitsivitsy.
Herinaratra madio sy fanatsarana sary
Araka ny fantatra nandritra ny herinandro maro, Ireo Huawei Mate 30 dia mampiasa Kirin 990 ho toy ny processeur. Izy io dia processeur izay natolotra tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny IFA 2019 tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Ho fanampin'ny maha-processeur matanjaka indrindra izay navelan'ny mpanamboatra sinoa anay hatreto eny an-tsena ary ny voalohany tonga miaraka amina 5G natoraly. Ity puce ity dia manome hery lehibe an-tariby, ankoatry ny fanomezana toerana lehibe kokoa ny faharanitan-tsaina artifisialy.
Ny fakantsary dia iray amin'ireo fanatsarana lehibe an'ity taranaka ity. Ny Huawei Mate 30 dia mampiasa sensor triple aoriana ary ny maodely Pro dia mampiasa fakan-tsary efatra amin'ity tranga ity. Ny sensor dia ampiasaina no mihatsara. Ho fanampin'ny fanatsarana miavaka amin'ny resaka fandraisam-peo. Indrindra amin'ny firaketana mihetsika miadana be, azo atao ny manoratra amin'ny 7680 fps miaraka amin'ity maodely Pro ity. Amin'izany fomba izany dia mihoatra ny mpifaninana rehetra aminy izy, mampiseho indray fa ny orinasa dia resahina eo amin'ny sehatry ny fakana sary an-telefaona.
Miaraka amin'ny Android Open Source ary tsy misy Google Apps
Ny iray amin'ireo fisalasalana lehibe ananan'ny mpampiasa dia ny fahafantarana ny rafi-piasana izay ho ampiasain'ity telefaona finday ity. Huawei dia nanamafy fa tonga ireto Mate 30 ireto Android Open Source + EMUI 10 sy HMS (Huawei Mobile Services). Ny Google Apps dia tsy ho tonga tampoka amin'ny finday, toy ny atahorana tato ho ato. Tsy hisy ny Google Play Services hapetraka ao amin'ireo maodely ireo araka izany.
Ny marika dia manamafy fa ho azo atao tsy ho ela ny fidirana amin'izy ireo. Na dia tsy nomena antsipirihany aza ny momba ilay takelaka dia hanamora ny fidiran'ny mpampiasa azy ireo fotsiny. Ny orinasa dia manasongadina ny fivarotana App Galery azy manokana, izay ahitantsika rindranasa maherin'ny 11.000 ankehitriny. Ny asa dia atao amin'ny orinasa hafa ka io vola io dia hitombo rehefa mandeha ny fotoana. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy misy ny fampiharana toa ny Facebook na WhatsApp, saingy antenaina fa ho vita tsy ho ela izany.
Ireo vahaolana ireo dia mbola mivoatra tanteraka. Satria, bebe kokoa no ho fantatra rehefa tonga eny an-tsena ny Huawei Mate 30, araka ny nolazain'izy ireo avy amin'ny orinasa mihitsy. Fiandrasana mandritra ny herinandro maromaro, izay ahitanao ny tsipiriany misimisy kokoa avy amin'ny mpanamboatra azy ihany. Nanamafy ny orinasa fa hanamora ny fametrahana ny Google Apps na Google Play Services izy ireo. Mandritra izany fotoana izany dia mampiasa vola be amin'ny fampiharana azy ireo sy amin'ny fivarotana azy izy ireo.
Mazava ho azy, araka ny azo takarina amin'ity tranga ity, lGoogle Play Store dia tsy apetraka amin'ny alàlan'ny default amin'ny telefaona. Toy ny amin'ny rindranasa Google na ny hafa izay mbola tsy ao amin'ny magazay, azo atao ny mampidina azy io ny mpampiasa. Fa ny fomba hitrangan'izany dia zavatra izay iasana ankehitriny.
Araka ny efa voalaza tao amin'ny orinasa, Huawei Mobile Services dia hanana ny GSM, GPS ary ny sarintany. Mandroso izy ireo ankehitriny. Ka hihaona amin'izy ireo isika amin'ny alàlan'ny fandefasana telefaona amin'ny fararano. Iray amin'ireo zava-baovao lehibe ny Huawei Assistant. Satria tsy afaka mampiasa Google Assistant ianao dia mandefa ny mpanampy azy manokana mba ho afaka hampiasa amin'ny telefaona. Hamela ny fiasa mitovy amin'ny anananay amin'ny mpanampy Google. Amin'ity tranga ity ihany no marika.
Ankoatry ny famelana anay ny angona rehetra momba ny mombamomba azy dia nizara ihany koa ny marika sinoa vaovao momba ny fanombohana amin'ireo Huawei Mate 30 sy Mate 30 Pro eny an-tsena. Telefaona roa andrasana izay liana tokoa amin'ny tsena, izay tsy hiandrasantsika ela loatra amin'ity lafiny ity.
Ny telefaona roa dia havoaka amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny telovolana fahaefatra amin'ity taona ity. Daty eo anelanelan'ny faran'ny volana oktobra sy novambra no dinihina, saingy antenaina fa hivoaka ao anatin'ny herinandro vitsivitsy ny angona rehetra. Ka holazainay aminao bebe kokoa rehefa misy angona momba izany.
Ny telefaona dia halefa amin'ny loko Emerald Green, Space Silver, Cosmic Purple, loko mainty. Ho fanampin'izay, voamarina fa ny loko Green Green sy ny Orange dia halefa amin'ny kinova hoditra legioma.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei Mate 30 sy Mate 30 Pro: ny farany avo lenta an'ny marika
Amin'ny Android 10 dia azonao atao ny manadino ny famoahana atiny amin'ny Internet amin'ny fampiharana Chrome
Ofisialy io: ny Realme X2 dia ho finday miaraka amin'i Snapdragon 730G